Maqaalka Suzi Shapiro Martech Zone |
Maqaallada by Suzi Shapiro
Suzi Shapiro waxay noloshiisa oo dhan ku qaadatay barashada sida dadku u shaqeeyaan iyo sida loo isticmaalo macluumaadkaan si noloshooda ay u fiicnaato. Suzi waxay leedahay waayo-aragnimo sannado badan ah jaamacad cilmi-nafsi iyo cilmi-baaris cilmi-baaris iyo cilmi-baare Khibrad Isticmaalayaal ah waxayna la shaqeysay dad ka kala yimid meherado kala duwan, Farsamo illaa Dhaqaale illaa Caafimaad illaa Waxbarasho. Suzi hadda waa la-taliye Khibrad Maamule Maamulaha CufkaDrive. Ku dhaqankooda Khibrada Khibrada Isticmaalaha ayaa hagaajin kara howlaha, adeegyada iyo wax soo saarka. Waxay sidoo kale mas'uul ka tahay horumarinta tababarka dadka raba inay hagaajiso hababka Naqshadeynta Khibradaha ee shirkadaha.